Sanxin nwere obi ụtọ na gị!
Gịnị mere ụbọchị ụmụaka ji amasị gị nke ukwuu? na mmadụ na nwata, iswa dị mfe, Mgbe ị zutere ndị mmadụ, ị nwere obi ebere; Anwụ na-acha, iswa ka dịkwa ka nke ọhụrụ. Mkpa nke nwatakịrị dị ọcha na ndụ ， Ma eleghị anya, ọ bụ, Na ọchịchọ ịmata ile kaleidoscop ...
Novel coronavirus, odeakwụkwọ kọmitii Party nke Nanchang, Xiong Yunlang, osote onye isi nke ọgbakọ ndị omeiwu a, Wu Xi, osote onye isi oche nke gọọmentị mpaghara ahụ, Wan Weiguo, osote onye isi oche nke ógbè CPPCC, Wan Weiguo, odeakwụkwọ nke kọmitii otu pati Sanjiang , de ...
N'ehihie nke February 12, Rao Jianming, odeakwụkwọ nke ndị otu na osote onye isi oche nke Jiangxi Provincial Federation nke ndị ọrụ ọrụ ọrụ, wee banye n'ime ọgwụ Sanxin iji nyochaa ọrụ mgbochi na njikwa ọrịa, ma n'otu oge ahụ zigara 50000 yuan nke nkasi obi mon ...
Mwakpo ihu na mbido mbụ | ememe mmechi zuru oke
N'ehihie nke May 23, 2020, Sanxin medical mere asọmpi okwu nke "na-ewere ọnọdụ dị ka etiti" na ala 6th nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nke Zhou Cheng, bụ ebe na-achịkwa akpaaka na-elekọta. Ihe nkiri a bụ uzo izizi anyị na-eche ihu, ọ bụkwa ebe Taoist gbabara ...
N'ime afọ "ọrịa" pụrụ iche, anyị buru ụzọ kpọta "Xinhuo" site na igwe ojii ma bịarute na ezinụlọ Sanxin na June 28. Talent bụ ntọala nke ụlọ ọrụ ahụ. Secretary General Xi ekwusiwo ike ugboro ugboro na talent bụ ihe eji enyere ndụ aka ịghọta natio ...
81Sxinxin Ahụike & Derui na-achọ mmadụ ọrụ mmadụ
Na May 19, 2020, iji gboo mkpa dị iche iche nke mmepe na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, Sanxin Medical Co., Ltd. na Dirui Consulting Co., Ltd. mepere nzukọ nzukọ nke njikwa ọrụ mmadụ. The oru ngo tumadi na-elekwasị anya na ize na ndụmọdụ na talent i ...